Mareykanka oo gargaar u diray wadanka Venezuela – Radio Daljir
Febraayo 17, 2019 6:13 b 0
Diyaaradaha militariga Mareykanka ayaa gaarsiiyay gargaar banii’aadantinimo oo loogu talagalay shacabka Venezuala, waxaana ay diyaaraduhu ka dageen xuduudda wadanka Venezueala ee Colombia magaalada Cucuta, kadib markii hogaamiyaha wadankaasi uu diiday gargaarka Mareykanka uuna ku tilmaamay mid siyaasadaysan.
Gargaarkan ayaa ku yimid codsi hogaamiyaha mucaaradka ee wadanka Venezuala Juan Guaidó, kaasi oo isku magacaabay inuu yahay madaxwaynaha Kumeel gaarka ee dalkaasi bishii lasoo dhaafay.
Madaxwayne Nicolas Maduro ayaa ku eedeeyey gargaarka Mareykanka uu soo diray inuu yahay shir qool loogu soo duulayo Venezuala.
Mr Guido ayaa dhankiisa sheegay ilaa lix boqol oo kun oo reer Venezuala inay si qarash la’aan ugu khidmayn dooanaan shacanka in gargaarkan lasoo daabulo.
Balse weli macadda in dowladda Venezuala hogaamiyaheeda oo aad isaga soo horjeedaan Mareykanka inuu aqbali doono in wadankiisa lasoo geliyo iyo in kalle.